Fonts - Page2- မြန်မာမိသားစုဖိုရမ်
မြန်မာမိသားစုဖိုရမ် » ..:: ကွန်ပျူတာနယ်ပယ် ::.. » ကွန်ပျူတာဆိုင်ရာဆွေးနွေးချက်များ » Desktop Fun
Desktop Fun Windows အမျိုးမျိုးတို့အတွက် Wallpapers၊ Icon၊ Themes၊ Fonts စသည်များကိုစုစည်းပေးထားပြီး ၊ အသုံးပြုပုံအကြောင်းတို့ကို ဆွေးနွေးထားသည့် နေရာဖြစ်ပါသည်.။
ပို့စ် 213 ခုအတွက် 2,667 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
ပြန်စာ - Font pack
မတူးရေ.... အလုပ်လုပ်တဲ့ လင့်ခ်က ၂ ခုလောက်ပဲ ရှိတယ် မရယ်.. ကယ်ပါဦး။
ဘယ်ခေါင်းစဉ် ၊ ဘယ်သူတင်ပေးတာလဲ သေချာလေးပြောပေးပါ၊ တော်တော်များများလင့်တွေက သေနေတာများပါတယ် ၊ ဒါမှ သေချာပြန်ရှာ ပေးလို့ရမှာပါ ..။
ထင်မြင်ချက်များ ဆွေးနွေးခြင်းများ ကြိူဆိုပါတယ် ခင်ဗျာ.......။
လူတွေရဲ.အတတ်အသိပညာ ဆိုတာတကယ်တော့ အာရုံ သိလေး သက်သက်မျှသာ ဖြစ်ပြီး၊ အတွေးအခေါ်ပညာတွေအပေါ် မာန်မာန၊မစ္ဆရိယ စေတသိတ်တွေနဲ့ တန်ဆာဆင်လိုက်ရင်တော့ သတိတရားကင်းမဲ့တဲ့ အပြုအမူ၊ တကဲ့စစ်မှန်သောတတ် သိပညာရှင်တို့ရဲ့အမူအကျင့်နဲ့ဆန့်ကျင် ပြီးသားလို့မှတ်ယူမိပါတယ်။
( ဆရာ ဦးရဲမြင့် )
လောကမှာ သူများကို ဆုံးမရတာထက် ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဆုံးမရတာ အခက်ဆုံးပါ ၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကို လိမ္မာအောင် ပထမ ဆုံးမကြရမယ် ၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဆုံးမကြပါ။
( ဓမ္မပဒပါဠိတော် )
刘 江 才.....နေ
အောက်ပါအသင်းဝင်6ဦးတို့မှ နေမင်းမောင် အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
တီဘွား, သန့်ဇင်ဌေး, မောင်သံသရာ, arkaraung, aungphyo, minthike
Find More Posts by နေမင်းမောင်
14-04-2011, 03:53 AM
great hand writting fonts
ဖိုတိုရှော့သမားများနှင့်အခြားလိုအပ်တဲ့နေရာတွေမှာ အသုံးပြုနိုင်အောင် ကျွန်တော်မှာရှိတဲ့ font pack တွေကို ဒီနေရာလေးမှာ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ ရှိပြီးသားဆိုရင်လည်း ခွင့်လွှတ်ပါ။ မရှိသေးတဲ့ အကို၊အမ များကတော့ အောက်မှာရှိတဲ့ နှစ်သက်ရာဖောင့်များကို ရွှေးယူလိုက်ပါ။
foreign look font
အထဲကဖိုင်ထဲမှာ janpanese,chinese,greek,roman,russian,various,western font တွေပါပါတယ်။
love font pack
photoshop အတွက် 143 unusuals fonts
master font collection 2008 | + 20000 fonts | 171 mb
iso ဖိုင်နဲ့ပါ ။ iso နဲ့ အဆင်မပြေရင်ပြောပါ ကျွန်တော် ဖြေပြီးတင်ပေးပါ့မယ် ။
ifile.it မှ ဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်
100 creative fonts collection
100 ttf | 34 mb
font အလန်းလေးတွေပါ ..
စာမျက်နှာ ဖောင်းပွသွားရင်ခွင့်လွှတ်ပါ။ လိုချင်တဲ့ ဖောင့်ပက်လေးများ တင်ပြီးရင် ဒီဟာကို ဖျက်ရင် ဖျက်လို့ရပါပြီ။ ဘယ်လင့်ခ်ကို လိုချင်တာလဲ ဆိုလို့ပါ။ လိုချင်တာတော့ အကုန်ပဲ ခင်ည ... ကျနော့်အတွက် အများကြီး အသုံးဝင်မှာမို့ပါ။
14-04-2011, 09:02 AM
ကျွန်တော်ရှာလို့တွေ့တဲ့ လင့်လေးတွေကို ပေးလိုက်ပါတယ် အစ်မ။ ဖောင့်တွေကတော့ အောက်ကအတိုင်းပါပဲ။
*Christmas font pack (45 fonts)
*Pixel font pack (126 fonts)
*Sports font pack (49 fonts)
*Lovely font pack (38 fonts)
*Fire-Ice font pack (18 fonts)
*Foreign look font pack (200 fonts)
*Hand writting font pack (200 fonts)
*Arabic font pack (76 fonts)
*Farsi font pack (86 fonts)
အစ်မ ထပ်လိုချင်သေးယင်တော့ ဒီနေရာမှာ အများကြီးရှိပါသေးတယ်။ အဆင်ပြေပါစေခင်ဗျာ။
အောက်ပါအသင်းဝင်7ဦးတို့မှ bagothar85 အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
သန့်ဇင်ဌေး, နေမင်းမောင်, မောင်သံသရာ, minthike, thureinsoe, Toxic, tu tu
ပို့စ် 117 ခုအတွက် 711 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
ကျွန်တော်လည်း အနုပညာအိမ်ဖေါင့်တွေလိုချင်ပါတယ်ဗျာ. . .ကျွန်တော်ကနယ်က ရုံးမှာကွန်ပျူတာစာစီစာရိုက်လုပ်ပေးရပါတယ်.. .တစ်ခါတစ်လေ သုံးစရာလေးတွေရှိလာလို့ပါ. . .
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ minthumon အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Find More Posts by minthumon
14-04-2011, 11:33 AM
Originally Posted by minthumon
ကျွန်တော်လည်း အနုပညာအိမ်ဖေါင့်တွေလိုချင်ပါတယ်ဗျာ. . .ကျွန်တော်ကနယ်က ရုံးမှာကွန်ပျူတာစာစီစာရိုက်လုပ်ပေးရပါတယ်.. .တစ်ခါတစ်လေ သုံးစရာလေးတွေရှိလာလို့ပါ. . .
အနုပညာအိမ်ဖောင့် တွေဆိုရင် အောက်ကပို့စ်လေးမှာ သွားကြည့်လိုက်ပါအစ်ကို။ အဲဒီမှာ တင်ပေးထားတာတွေရှိပါတယ်။ အစ်ကို ထပ်လိုချင်ယင်လဲ အဲဒီမှာပဲတောင်းလိုက်ယင် ရနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ အဆင်ပြေပါစေ။
အောက်ပါအသင်းဝင်6ဦးတို့မှ bagothar85 အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
သန့်ဇင်ဌေး, နေမင်းမောင်, မောင်သံသရာ, minthike, Toxic, tu tu
14-04-2011, 01:04 PM
ကျွန်တော် ဒီ Fonts တောင်းထားတာကို တွေ့တယ်ဗျ မလှည့်ဖြစ်တာနဲ့ ခဏနေနေလိုက်တာ ….
တကယ်တော့ Fonts တွေက နက်ပေါ်မှာ အများကြီးပါပဲ့ စိတ်ကြိုက် ဒေါင်းလို့ ရနိင်တဲ့နေရာတွေလည်း အများကြီးပါပဲ့ ။ တစုတစည်းတည်း စုထားဖို့ ရဖို့ ဆိုတာလည်း လိုချင်မှာပါပဲ့။ ကျွန်တော်လည်း စုဆောင်းထားတာလေးတွေကိုပဲ့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ တကယ် တမ်းဖြစ်နိင်မယ် ဆိုရင်တော့ မိမိ စိတ်ကြိုက် ဖောင့် ပုံစံ ဒီဇိုင်းလေးတွေကို ကိုယ်တိုင်လိုက်ရွေးပီးဒေါင်းတာ အကောင်းဆုံးပါပဲ့။ အများကြီးကို တခါတည်းရပေ့မယ် ဘယ်ဖောင့်က ဘယ်ပုံစံဆိုတာ သိနိင်မှာမဟုတ်ဘူးလေ. တခုချင်းဆီဆိုရင် ပိုပီးတော့ အဆင်ပြေနိင်ပါတယ်။ စိတ်ကြိုက်လည်းရတာပါ Googling လုပ်လိုက်ရင် အများကြီး ရနိင်ပါတယ်။ တစုတစည်းတည်း ရနိင်တယ် ဆိုပေ့မယ် သူစိတ်ကြိုက်ဖောင့် ကိုယ်စိတ်ကြိုက်ဖောင့်တွေ တူမှာ မဟုတ်သလို လိုချင်တဲ့ဖောင့် ပုံစံ ရချင်မှလည်း ရမယ် ပါချင်မှ လည်းပါလာမှာမို့ ပါ။
ဒါမှမဟုတ် ကျွန်တော် တို့ စိတ်ကြိုက်ဖောင့်တွေကို ဖိုတိုရှော့နဲ့ ကိုယ်တိုင်စိတ်ကြိုက်လေးလဲ့ ဖန်တီးလို့ရပါသေးတယ်။ ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးပီး ရလာတဲ့ဖောင့်က ပိုအရသာရှိတယ်လို့ ကျွန်တော် ထင်တယ်။ ကျွန်တော်တို့ ဘ၀တခုလုံး နက်ရမယ့်နေရာမှာပဲ့ နေရမှာ မဟုတ်ဘူး။ ကျွန်တော်တို့ နက်မရတဲ့နေရာရောက်ခဲ့ရင်လည်း ကိုယ်ပိုင်ဖောင့်လေးတွေ လုပ်တက်ဖို့တော့ လိုမယ် ထင်တယ်။ အဲ့တော့ ဖိုတိုရှော့ကိုတော့ လေ့လာပီးလုပ်ကြည့်စေချင်သေးတယ်။ ကိုယ်ပိုင်ဖောင့်လုပ်တာကလည်း ဖိုတိုရှော့နဲ့ဆို မခက်ပါဘူး။ဒီနေရာမှာ ဥပမာ သွားဖတ်ကြည့်နိင်ပါတယ်။
စကားကြုံလိုပြောသွားတာပါ . ခုတော့ ဖောင့်တွေကို ကျွန်တော်တက်န်ိင်သလောက်စုစည်းပေးထားပါတယ်။ အောက်ကလင့်တွေမှာ ဒေါင်းယူနိင်ပါတယ်။ ဒီဖောင့်တွေလောက်ဆို အဆင်ပြေမယ် ထင်ပါတယ်။ Adobe_Photoshop font ရဲ့ အောက်ကတော့ . Fonts ပေါင်း 7000 ပါပါတယ်။ နောက်ထပ်လည်း အများကြီးပါ 1000 fonts တွေ ပါသလို အောက်မှာပဲ့ကြည့်ပေးပါ။ တကယ်လို့မှ အဲ့ထက် ပိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ကျွန်တော့မှာ 0-9 Collectons နဲ့ A-Z ထိ တပိုင်းချင်းဆီ ခွဲထားတဲ့ဖောင်တွေ ရှိပါသေးတယ်။ ဂစ်များလို့ မတင်ပေးလိုက်တော့ပါဘူး ၂ ဂစ်ကျော်လောက် ဖြစ်နေလို့ပါ။
Collection_of_832_Awesome_Fonts.rar - 26.73 MB
Disney_Stamp_Collection__Magic_by_imwalkingwithaghost.zip - 386.64 KB
fonts_collection.rar - 7.3 MB
Hung_Lan_font.rar - 1.66 MB
Links_Covers_jethuynh.rar - 3.56 MB
10000_Fonts_Collection.rar - 13.49 MB
Fonts_for_Adobe_Photoshop.rar - 170.72 MB
87_Great_Fonts_Collection_-_Malestrom.rar - 5.48 MB
The_Best_And_Most_Expensive_Fonts_1500_Font_Collection.rar - 48.99 MB
ဒီထက် ပိုလိုချင်သေးတယ်ဆိုရင်တော့ နောက်ထပ်လိုချင်သေးတယ်ဆိုရင်တော့ ဒီလင့်အောက်မှာ သွားကြည့်ပေးပါ Mediafire လင့်ကနေ ဒေါင်းလို့ ရနိင်ပါတယ် Hotfile တို့လို လင့်မျိုးကနေဆို နာရီတွေ စောင့်နေရမှာမို့ပါ။
အောက်ပါအသင်းဝင် 8 ဦးတို့မှ သန့်ဇင်ဌေး အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
နေမင်းမောင်, မောင်သံသရာ, aungphyo, bagothar85, kokomyomin, minthike, Toxic, tu tu
Originally Posted by bagothar85
အဲ့ဒါကိုလေ တခြားဆိုက်ကနေ တင်ပေးပါလားဟင် mediafire ဆိုရင်တော့ အတိုင်းထက်အလွန်ပေါ့။
နောက်အောက်က တခုက ဘယ်လိုဒေါင်းရလဲ မသိဘူးနော်။
အီးးးး မေးလွန်းလို့ ငါ့ ရိုက်လွှတ်တော့ မလား မသိ။
နောက် ဖောင့်တွေ အများကြီးတင်ပေးသွားတဲ့ ကိုသန့်ဇင်ဌေးရေ... ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အခုနက မဒေါင်းကြည့်ရသေးလို့ပါ။ အခု ဒေါင်းပြီးသွားပြီ အများကြီး အဆင်ပြေပါတယ်။ ကျေးဇူးခင်ည။ အဲ့ဒီကနေပဲ တမုန်း ဆွဲနေတယ်
Last edited by Toxic; 14-04-2011 at 11:55 PM..
14-04-2011, 10:25 PM
အဲ့ဒါကိုလေ တခြားဆိုက်ကနေ တင်ပေးပါလားဟင် mediafire ဆိုရင်တော့ အတိုင်းထက်အလွန်ပေါ့။နောက်အောက်က တခုက ဘယ်လိုဒေါင်းရလဲ မသိဘူးနော်။
အစ်မတော့ဆစ် ရေ... ကျွန်တော်ပဲ့ ပြန်တင်ပေးလိုက်ပါပီ။ အစ်မကိုလည်း နိပ်စက်တာ များနေပီဆိုတော့ ခုတော့ ကျေပီပေါ့နော်.... အောက်က လင့်မှာ ယူလိုက်ပါ... Mediafire မှ ကြိုက်ပါတယ် ဆိုတဲ့ သူများမို့ သေချာကိုရွေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ မကျော်ရဘူးလေ..သူများတွေလို
အဲ့ထက်ပိုလိုချင်သေးတယ်ဆိုရင်တော့ ကိုပဲခူးသာ ညွန်းထားတဲ့ဆိုဒ်က နေ သွားကြည့်ပေးပါ အဲ့ထဲ့က ကြိုက်တဲ့ လင့် ဒေါင်းလို့ မရတဲ့ လင့်( သေတဲ့လင့်မပါ) ဒေါင်းလို့မရတာကိုပြောတာ ကျွန်တော် ဒေါင်းပီးပြန်တင်ပေးပါ့မယ်။
Last edited by သန့်ဇင်ဌေး; 14-04-2011 at 10:26 PM..
နေမင်းမောင်, မောင်သံသရာ, aungphyo, bagothar85, minthumon, Toxic, tu tu
15-04-2011, 12:48 AM
အပေါ်မှာ ကိုသန့်ဇင်ဌေးကလည်း ဖောင့်တွေတင်ပေးပြီးပါပြီ။ အစ်မလိုချင်တဲ့ အပေါ်က ဖောင့်တွေကိုလည်း ကျန်တာတွေကို လိုက်ရှာပြီး Ifile ကို ပြန်ပြောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။ Ifile ကနေတော့ အဆင်ပြေမယ် ထင်တယ်နော်။ ကျွန်တော့်ဆီမှာလည်း အဲဒါလေးတခုကပဲ လွယ်တာမို့လို့ပါ။ File Importer လေးအားကိုးနဲ့ပါ ။ အဆင်ပြေပါစေခင်ဗျာ။
143 unusuals fonts
Master fonts collection 2008
Last edited by bagothar85; 15-04-2011 at 01:46 AM..
သန့်ဇင်ဌေး, နေမင်းမောင်, မောင်သံသရာ, aungphyo, minthike, Toxic, tu tu
21-08-2011, 08:36 PM
ပို့စ် 14 ခုအတွက် 50 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
need all mm fonts
windoe os volume 1 medinum quality & high quality
နစ် အုပ် က ဖောင့် များ မမြင်ရလို့ ပါခင်ဗျာ။
အလား တူပဲံ တချို့ စာအုပ်များ မှ ဖောင့် များလည်း မမြင်ရလို့ပါ ။
ဒါကြောင့် ebook မှ မြန်မာဖောင့် များ မြင်ရဖို့ရန် မြန်မာ ဖောင့် များ ကို
ပါ sharing လုပ် ပေး ဖို့ တောင်း ဆို ပါတယ် ခင်ဗျာ ။
Find More Posts by waihtutpai
21-08-2011, 08:58 PM
ပြန်စာ - need all mm fonts
အောက်မှာ ကိုကေဇက်ပေးထားတဲ့ MM Fontတွေကို ဒေါင်းလိုက်ပါ. ပြီးရင် contorl panelထဲက font ထဲမှာ copy ဆွဲပြီးတော့ pasteလုပ်လိုက်ပေါ့.
မမြင်မှာဆိုးလို့.. ကိုကေဇက်ပေးထားတဲ့ လင့်ကိုပဲ ထပ်ပေးလိုက်ပါတယ်..
အောက်ပါအသင်းဝင်6ဦးတို့မှ arkaraung အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
မောင်သံသရာ, bagothar85, bonge, g00gle, minthike, zo
21-08-2011, 09:02 PM
ကျွန်တော် အောက်မှာ အစ်ကိုကေဇက် တင်ထားပေးတဲ့ Myanmarfonts Collection ကို ပြန်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်..အဲဒီထဲမှာပါတဲ့ Zawgyi 2008 ဖိုဒါက Zawgyi keyboard ပါ.. အဲဒီအောက်က ဖောင့်တွေအကုန်လုံးကို Copy ကူးပြီး Control Panel >> Apperance >> Fonts ဆိုတဲ့ ဖိုဒါထဲကို Paste လုပ်လိုက်ပါ.. တကယ်လို့ ဖောင့်တစ်ခုခုက ရှိပြီးသားဆိုယင်တော့ Replace လုပ်မလားမေးယင် အစ်ကို့သဘောအတိုင်း ရွေးပေးလိုက်ပါ... အဲဒါဆို ဖတ်လို့ရလောက်ပါပြီ... အဆင်ပြေပါစေခင်ဗျာ...
Password >> WWW.Myanmarfamily.Org (OR) www.myanmarfamily.org
မောင်သံသရာ, မောင်ပေါ်ဦး, arkaraung, bonge, frogfish, g00gle, minthike, thureinsoe, zo
22-08-2011, 04:21 PM
ကျေးဇူး အရမ်းအရမ်းကို တင်ပါတယ် ခင်ဗျာ
အောက်ပါအသင်းဝင်3ဦးတို့မှ waihtutpai အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
မောင်သံသရာ, arkaraung, zo
ပြန်စာ - မြန်မာဖောင့်များ
Originally Posted by နတ်မင်း
ဇော်ဂျီဖောင့်နှင့် သုံးရတာမကျေနပ်သူတွေအတွက် ကျွန်တော်မှာရှိတဲ့ မြန်မာဖောင့်များကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
၀င်းမြန်မာ နှင့် တခြားဖောင့်မျိုးစုံ
အကိုရေ ကျွန်တော် ၀င်းမြန်မာဖောင့် ဒေါင်းတာလင့်ကပျက်နေလို့ ရှိရင်ကူညီကြပါဦးခင်ဗျား.......ကျေးဇူးပြုပြီး
အောက်ပါအသင်းဝင်2ဦးတို့မှ kohtaykyawe အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Find More Posts by kohtaykyawe
ပို့စ် 188 ခုအတွက် 1,653 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
Originally Posted by kohtaykyawe
စနိုးပြန်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်.....အဆင်မပြေသေးရင်တော့ အပေါ်က ပို့တွေလည်း တချက်လောက်ကြည့်ကြည့်ပါ အကိုပဲခူးတို့ အကိုအာကာတို့ တင်ထားတဲ့ ပို့တွေရှိပါတယ် အဆင်ပြေပါစေရှင် ခင်မင်လျှက် စနိုးလေး
ကြယ်တွေစုံနေတဲ့ ဒီလိုအေးချမ်းတဲ့ညထဲ တို့တစ်ယောက်တည်းဘဲ လွမ်းနေရတော့မယ် သူဘယ်အချိန်ပြန်လာမှာလဲ မျှော်ကာစောင့်လုိ့ နေသူကွယ် မင်းပေးခဲ့တဲ့ ရက်စက်ခြင်းများနဲ့ လူးလွန့်လို့နေခဲ့
အောက်ပါအသင်းဝင်6ဦးတို့မှ စနိုးလေး အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
မောင်သံသရာ, arkaraung, bagothar85, g00gle, tu tu, zo
Find More Posts by စနိုးလေး
ဟုတ်ကဲ့ရပါပြီ ကျေးဇူးပါပဲချင်ဗျာ အဆင်ပြေသွားပါပြီခင်ဗျာ.......ကျေးဇူးအရမ်းတင်ပါတယ်.....
အောက်ပါအသင်းဝင်4ဦးတို့မှ kohtaykyawe အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
စနိုးလေး, မောင်သံသရာ, arkaraung, zo
13-11-2011, 09:48 AM
mynnmar fonts ပန်းစာလုံးများလိုချင်လို့ပါ။အဆင်ပြေရင်တင်ပေးကြပါဦး။ကျေးဇူးတင်လျှက်
အောက်ပါအသင်းဝင်2ဦးတို့မှ born အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ပြန်စာ - myanmar fonts
စီအီ အဆင်ပြေပါစေဗျာ အဝေးရောက်မြန်မာတွေများအတွက်ပါ.......
အောက်ပါအသင်းဝင် 12 ဦးတို့မှ ဦးသာကြီး အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
$ညိုမင်းလွင်$, မောင်သံသရာ, ငြိမ်းချမ်း, arkaraung, aungphyo, bagothar85, essential, g00gle, minthike, Oliveway, tu tu, zo
27-01-2012, 07:22 PM
ပို့စ် 12 ခုအတွက် 71 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
Myanmar Fonts (မြန်မာစာလုံး ဒီဇိုင်းများ)
ဒီဇိုင်းလုပ်ငန်း၊ ကွန်ပျူတာ စာစီလုပ်ငန်းများအတွက်ဖြစ်ပါသည်။ Zawgyi, Myanmar3 များကဲ့သို့ အင်တာနက်နှင့် တွဲသုံးရန် မဟုတ်ကြောင်း ကြိုတင် သတိပေး အကြောင်းကြားအပ်ပါသည်။
Last edited by hartha; 27-01-2012 at 07:29 PM..
အောက်ပါအသင်းဝင်9ဦးတို့မှ hartha အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ဦးသာကြီး, မောင်သံသရာ, bagothar85, essential, juwathan, minthike, minthumon, tu tu, zo
Find More Posts by hartha
ပြန်စာ - Myanmar Fonts (မြန်မာစာလုံး ဒီဇိုင်းများ)
အောက်ပါအသင်းဝင် 11 ဦးတို့မှ hartha အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ဦးသာကြီး, မောင်သံသရာ, မောင်ပေါ်ဦး, မြန်အောင်သား, bagothar85, essential, g00gle, juwathan, minthike, minthumon, tu tu
ပြန်စာ - Fonts
ကူညီ ကြပါ့အုံးခင်ဗျာ ကျွန်တော်မှာ ကို ကေတီအမ် တင်ထာားတဲ့ မြန်မာဖောင့် ကို ဒေါင်းလုပ်ချပြီး မသုံးတတ်လို့ပါ။ ဘယ်လို သုံးရမလဲ မသိလို့ပါ။ကျွန်တော့်ကို ရှင်းပြပေးပါအုံးနော် ။ စက်ထဲကို ဘယ်လို အင်စတော့ လုပ်ရမလဲ။ ဆိုတာပါ မသိတာပါ။။။
အကိုရေ အင်စတောလုပ်ရမှာမဟုတ်ပါဘူးဗျာ သူက ဂျီတောပ့်ပါတော့ရိုက်လိုရတဲ့ဖောင့်တွေလို့ အင်စတောလုပ်ရတာမဟုတ်ပါဘူး Copy လုပ်ရတာပါ Start+R ကိုတွဲနှိပ်ပါ Run Box ကျလာပါမယ် Run Box မှာ Fonts လို့ရိုက်ပါ အဲ့ဒီဖိုင်ထဲကိုကူးထည့်ရမှာ အဆင်ပြေပါစေ အဲ့ဒါဆိုရင်အကို Word တို့ Excel တို့ Power Point တို့မှ သုံးလို့ရပါပြီ Note pad တို့မှာပေါ့ အဆင်ပြေပါစေ။
အောက်ပါအသင်းဝင်4ဦးတို့မှ မောင်ပေါ်ဦး အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
မောင်သံသရာ, bagothar85, minthike, zo
ကျွန်တော်ပို့စ်နံပါတ် ၂၂ မှာ တင်ပေးထားတဲ့ ၀င်းအင်းဝမြန်မာယူနီကုဒ်ဖောင့်ပါ ...လင့်ခ်သေသွားလို့ ပြန်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်.... ကိုပဲခူးသားရေ ကျွန်တော်တင်ပေးလိုက်ပြီ...
အစစအရာရာ အားလုံး အဆင်ပြေပါစေဗျာ
အောက်ပါအသင်းဝင်7ဦးတို့မှ ဇော်ရဲပိုင် အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
မင်းအာကာကျော်, မောင်သံသရာ, bagothar85, fieldmarshal, g00gle, tu tu, zo
ပို့စ် 15 ခုအတွက် 44 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
မြန်မာ ဖောင့်(pc) တွေလိုချင်လို့ပါ
ကျွန်တော် Data တွေ ထည့်ဖို့ အတွက် မြန်မာဖောင့် အများအပြား လိုချင်လို့ပါ.... ယူနီ ဖြစ်ဖြစ် ရိုးရိုး ဖောင့် ဖြစ်ဖြစ် ရှိတာလေးတွေ တင်ပေးပါနော်.... ဖိုရမ်မှာ ရှာတာ ကျွန်တော့ ညံ့ဖျင်းမှု့ကြောင့်လား မသိဘူး. မတွေ့တာနဲ့ တော့ပစ် အသစ်ဖွင့် တောင်းလိုက်ရတာပါ.... ကူညီကျပါအုန်းနော်.
.... ကျေးဇူး အားကြီး တင်ပါတယ် ခင်ဗျာ
သတ္တ၀ါမှန်သ၍ တရားတွေ့ ချမ်းမြေ့သာယာ ရှိပါစေ.....(ချမ်းမြေ့ဆရာတော်)
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ ရှင်းလေး အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Find More Posts by ရှင်းလေး
Myanmar fonts collections
မြန်မာဖောင့်အစုံအလင်ပါ ပါတယ်။ .exe ပါ Install လုပ်ရုံပါဘဲ။
Art House (အနုပညာအိမ်ဖောင့်အစုံ)
တကယ်လို့ လိုအပ်အုံးမယ်ဆိုရင်လည်း ထပ်ပြီး တာင်းဆိုနိုင်ပါတယ်။
အောက်ပါအသင်းဝင်7ဦးတို့မှ ငပေကြီး အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
$ညိုမင်းလွင်$, စွမ်းကမ္ဘာ, မိုးတိန်, ရှင်းလေး, မောင်သံသရာ, fieldmarshal, tu tu
ကျွန်တော်ဆီမှာ ရှိသော ဖောင့်တွေပါ ။
ကျွန်တော်ကတော့ ဖောင့်တွေကို သိပ်မသုံးဖြစ်ပါဘူး ။
https://www.box.com/s/bxkb2yxpkwe73wvvkudv ကျွန်တော် မခေါ်တက်သော ဖောင့်တွေပါ ။Zawgyi တွေရော Yahoo စသော အမည်များနဲ့ပါ ။ နည်းနည်းများပါတယ် ။ ကျွန်တော်ဆီ ရောက်နေတာကြာပါပြီ မသုံးဖြစ်တာ ။
https://www.box.com/s/5aqbm4so0fp1tr4fc0pi မြန်မာဖောင့် Collection ပါ ။ ကျွန်တော် သုံးပါတယ် ။ Win Myanmar , CE , Ayer နဲ့ အခြားသော မြန်မာဖောင့်တွေပါ ။
$ညိုမင်းလွင်$, ငပေကြီး, ရှင်းလေး, မောင်သံသရာ, fieldmarshal, tu tu
အစ်ကို ကျေးဇူးပြုပြီး မြန်မာစာအားလုံးဖတ်လို့ ရအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ၊ မရဘူး။ ကျွန်တော်မှာဇော်ဂျီ ရှိတယ် ဝင်းအင်းဝလည်းရှိတယ်။ ကျေးဇူးပြုပြီး သင်ကြားပေးပါ ခင်ဗျာ
Find More Posts by Phoekwarlay
Originally Posted by Phoekwarlay
အပေါ်က သယ်ရင်းတွေပေးထားတဲ့ ဖောင့်တွေကို ထည့်ကြည့်ပါ။ အများသုံးဖြစ်တဲ့အတွက် ပေါ်မှာပါ။
ဒါမှမဟုတ် သယ်ရင်းရဲ့ မပေါ်ဘူးဆိုတဲ့ ဖောင့်က ဘာနဲ့ရိုက်ထားတာလဲလို့ စစ်ကြည့်ပါ။ စဖွင့်ဖွင့်ချင်းမှာ
သူသုံးထားတဲ့ဖောင့်မတွေ့တဲ့အကြောင်း error ပြတတ်ပါတယ်။ အဲဒီ့အချိန်မှာ ဖောင့်နာမည်ကို မှတ်ထား
ပါ ... အဲဒီ့ဖောင့်ကိုရွေးသွင်းကြည့်ပါ အဆင်ပြေမယ်ထင်ပါတယ်။
Word မှာမပေါ်တာလား pagemaker မှာမပေါ်တာလားခင်ဗျာ။
Word ပေါ်မှာ copy >> paste ချတာမျိုးဆိုရင်တော့ select all ပေးပြီး ဖောင့်ချိန်းပေးရပါတယ်။
မောင်သံသရာ, fieldmarshal, tu tu
ကျွန်တော် ဖောင့်ဖိုင်တွေကို ကြည့်တဲ့အခါ *.ttf , *.fon , *.pfm အစသင်ဖြင့် File Type များကွဲပြားတာ တွေ့မိပါတယ် ။
နောက်ပြီး *.ttf True Type Font က အခြားသော ဖောင့်တွေထက် ကောင်းတယ်လို့လည်းကြားမိပါတယ် ။
Font Type တွေက ဘာတွေကွာ သလဲ သိချင်ပါတယ်ခင်ဗျား ။
အားသာချက် အားနည်းချက် များကို သိချင်ပါတယ် ။
နောက် အဲလို ဖောင့်များကို ဘယ်လိုများ ဖန်တီးထားတာလဲ ဆိုတာလေးပါ အကျဉ်းသိချင်ပါတယ် ။
Run Box ထဲမှာ ရိုက်လို့ရတဲ့ Command များ Zeiya ကွန်ပျူတာဆိုင်ရာတိုလီမုစများ 59 12-07-2013 04:08 PM
ကိုယ်ပိုင် website ဖန်တီးခြင်း။ intranet မှသည် internet ဆီသို့ yeakharr ဆွေးနွေးချက်များ 220 21-08-2012 12:31 AM